Rivaroxaban ntụ ntụ (366789-02-8) hplc≥98% | AASraw R&D Reagents
/ ngwaahịa / Ndị R & D mmeghachi omume / Rivaroxaban ntụ ntụ
Rating: SKU: 366789-02-8. Category: Ndị R & D mmeghachi omume
AASraw nwere njikọ na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Rivaroxaban ntụ ntụ (366789-02-8), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro njikwa njikwa.
Rivaroxaban ntụ ntụ video
Rivaroxaban ntụ ntụ isi agwa
aha: Rivaroxaban ntụ ntụ
Usoro Molecular: C19H18ClN3O5S
Molekụla arọ: 435.88
agba: White na ntụ ntụ
Uzo ntụpu Rivaroxaban
Rivaroxaban ntụ ntụ bụ ihe na-eme ka ọ bụrụ onye na-emepụta ihe na mbụ. N'adịghị ka aghafarin, nyocha nlekọta nke nyocha nke INR adịghị mkpa. Otú ọ dị, ọ dịghị ngwọta dị na ihe omume nke nnukwu ọbara. Naanị mbadamba mbadamba 10 nwere ike were na-enweghị ihe oriri. A ghaghị iji nri na 15 mg na mbadamba Mbadamba 20.
Ihe ọjọọ kachasị njọ bụ ọbara ọgbụgba, gụnyere ọbara ọgbụgba siri ike. A na-ejikọta ntụpọ nke Rivaroxaban na ọnụ ọgụgụ dị ala nke ọbara ọgbụgba na-egbu egbu karịa aghafarin ma ejikọta ya na ọnụ ọgụgụ dị elu nke ọbara ọgbụgba n'ime akụkụ eriri afọ. Enweghi ngwọta maka Rivaroxaban ntụ ntụ (n'adịghị ka aghafarin, nke nwere ike ịgbanwe ya na vitamin K maọbụ prothrombin mgbagwoju anya), nke pụtara na ọbara ọgbụgba siri ike nwere ike isi ike ijikwa.
Na October 2014, Portola Pharmaceuticals mechara nyochaa usoro nke mbụ nke I na II maka etexanet alfa dịka ngwọta maka ihe kpatara Xa inhibitors nwere ntakịrị mmetụta ọjọọ, ma malite usoro nyocha nke Phase III. A na-atụ anya na ọ bụ 2016 ka a ga-enyocha Internet alfa. N'ihe banyere 2017, Ngalaba Nri na Ọgwụ Na-ahụ Maka Nchịkwa na US agaghị anabata ya.
N'ihe gbasara 2015, nyocha ndị ahịa na-egosi imebi imeju, na ọ dị mkpa ka ọmụmụ ihe dị mkpa iji tụlee ihe ize ndụ ahụ. A na-egbochi ọgwụ ọjọọ na ndị nwere ọrịa imeju dị ukwuu na ọrịa akụrụ na-egbu oge, bụ ndị a na-adịghị eji ọgwụ ọjọọ eme ihe.
Rivaroxaban ntụ ntụ nwere ịdọ aka ná ntị iji gbaa ọhụụ na ndị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe ekwesịghị ịkwụsị ya tupu ha na ndị ọkachamara na-ahụ maka ahụike na-akparịta ụka, n'ihi na ọ nwere ike ime ka ọrịa strok baawanye.
Na 2015, Rivaroxaban ntụ ntụ mere ka ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke akụkọ a na-akọ banyere mmerụ ahụ dị njọ n'etiti ọgwụ ndị a na-enyocha mgbe niile na Usoro Mgbasa Ozi Mgbasa Ọdachi nke FDA (AERS).
Rivaroxaba nke mepụtara na mbido. mgbochi nke ọrịa strok na usoro embolism na ndị ọrịa nwere fibrillation atrial nonvalvular; ọgwụgwọ thrombosis miri emi (DVT) na ụbụrụ akpa ume (PE); iji belata ihe ize ndụ nke ịghaghachi DVT na / ma ọ bụ PE. N'ihi enweghị ọmụmụ nchekwa, anaghị atụ aro ka e jiri ya mee ndị nọ n'okpuru afọ 18. A naghị atụ aro ojiji ya na ndị nwere nnukwu nrụrụ akụrụ (<30ml / min).
Rivaroxaban ntụ ntụ bụ ihe na-eme ka ọ bụrụ onye na-emepụta ihe na mbụ. N'adịghị ka aghafarin, nyocha nlekọta nke nyocha nke INR adịghị mkpa. Otú ọ dị, ọ dịghị ngwọta dị na ihe omume nke nnukwu ọbara. Naanị mbadamba mbadamba 10 nwere ike were na-enweghị ihe oriri. A ghaghị iji nri na 15 mg na mbadamba Mbadamba 20. FDA kwadoro na July 1, 2011.
Ịdọ aka ná ntị na Rivaroxaba ntụ ntụ
Ihe kachasị na-ebute ya bụ ọbara ọgbụgba, gụnyere ọbara ọgbụgba siri ike nke ị na-enweta ọ bụla n'ime ihe mgbaàmà ndị a ma ọ bụ ndị edepụtara na ngalaba ahụ dị mkpa, kpọọ dọkịta gị ozugbo:
ọbara ọgbụgba ọbara dị arọ
na-agba ọbara site na goms gị
ịkwa ụra ma ọ bụ ịmịpụ ọbara ma ọ bụ ihe onwunwe dị ka kọfị
ọbara ọbara, nwa, ma ọ bụ akwa oche
acha uhie uhie, ma ọ bụ mmerụ ahụ
dizziness ma ọ bụ ike
ọhụụ na-ahụ n'anya
mgbu na ogwe aka ma ọ bụ ụkwụ
ike iku ume ma obu ilo
mgbu ma ọ bụ ọzịza na saịtị ọnya
Rivaroxaban ntụ ntụ bụ ihe e ji emepụta ngwa ngwa na anticoagulant na kpọmkwem ihe kpatara Xa inhibitor nke a na-eji egbochi ọrịa strok na nke ndị na-arịa ọrịa na-adịghị ala ala, tinyere ọgwụgwọ na mgbochi nke ọkpụkpụ thromboses na nke mgbagwoju anya. A na-ejikọta ngwugwu Rivaroxaban na ọnụego dị elu nke enzyme elu mgbe a na-agwọ ya nakwa mgbe ọ na-adịghị ahụkebe na ọ ga-emerụ ya na jaundice.
A na-egosi varoxaban ntụ ntụ maka igbochi ihe omume thromboembolic venous (VTE) na ndị ọrịa gabigara mgbanaka hips na mgbatị zuru ezu; mgbochi nke ọrịa strok na systemic embolism na ndị ọrịa nwere fibrillation atrial nonvalvular; ọgwụgwọ thrombosis miri emi (DVT) na ụbụrụ akpa ume (PE); iji belata ihe ize ndụ nke ịghaghachi DVT na / ma ọ bụ PE. N'ihi enweghị ọmụmụ nchekwa, anaghị atụ aro ka e jiri ya mee ndị nọ n'okpuru afọ 18. A naghị atụ aro ojiji ya na ndị nwere nnukwu nrụrụ akụrụ (<30ml / min).
Rava Powder Powder
Esi zụta Rivaroxaban ntụ ntụ si AASraw